Legal Resources Foundation Inobudirira Kupikisa Chikamu 193 cheBumbiro reMitemo
Gumiguru 16, 2020
Sangano reLegal Resources Foundation richishanda nesangano reDeaf Zimbabwe Trust vakaenda kumatare vachipikisa chikamu 193 chebumbiro remitemo.
Sangano reLegal Resources Foundation rinoti rinofara nemutongo wakaturwa mudare repamuroso reHigh Court musi wa 7 mwedzi uno, uyo wakati kusunga nekuchengetedza vanhu vasinganzwe kana kutaura kunotyora kodzero dzavo pasi pebumbiro remitemo yenyika.
Sangano iri rakabatana nesangano reDeaf Zimbabwe Trust, rakaenda kudare richipikisa chikamu 193 chebumbiro remitemo, icho chinotaura pamusoro pekusungwa nekuchengetedzwa kwevanhu vasinganzwe kana kutaura kana zvese.
Mutongi wedare akatambirawo chikumbiro chekuti mutemo uyu uvandudzwe akatura kuti gurukota rezvemitemo ringe raona kuti chikamu chemutemo ichi chavandudzwa mukati memwedzi mitanhatu.
Vanomirira nyaya dzinoendeswa kumatare neLegal Resources Foundation, Amai Valerie Zviuya, vanoti hurumende inofanirwa kuwanisa vasungwa vakadai mukana wekuve nemuturikiri ane hunyanzvi hwemutauro wemaoko, kwete kumatare edzimhosva chete, asi kumajeri kana musungwa uyu akawanikwa aine mhosva.
Hurukuro naAmai Valerie Zviuya